Classic Movies: Imisa todobaad ayuu tiyaatarada saarnaa filimka RAJA HINDUSTANI – Filimside.net
Classic Movies: Imisa todobaad ayuu tiyaatarada saarnaa filimka RAJA HINDUSTANI
Haddaba maanta waxaa miiska inoo saaran filimka jaceylka qiirada badan, heesahiisa wacan nolosha qoyskana ka hadlaayo oo Aamir Khan iyo Karisma Kapoor waligood lagu xasuusan doono waana RAJA HINDUSTANI waxaana naga soo codsaday aqriste Inj haadi.
RAJA HINDUSTANI waxaa wada jileen Aamir Khan iyo Karisma Kapoor. Waxaa Diretor ka ahaa Dharmesh Darshan sidoo kalena shirkada Cineyug Films ayaa maal galisay.
Raja Hindustani waxaa tiyaatarada la saaray 11 Nov 1996 waana filim All Time Blockbuster ah sidoo kalena wuxu soo xareeyay 43.14 Crore (Trade Figure) halka kooxda cajaladaha qeybiyaan ay ka heleen 27.89 Crore asigoo noqday filimada lacagaha ugu badan soo xareeyay ee sanadii 1996 la daawaday waana HIT-ka ugu weyn Aamir Khan sameeyay.
Raja Hindustani lacagtiisa 43.14 Crore haddii sicirka maanta lagu jaangooyo waxay u dhigantaa 394.05 Crore (Adjusted Net Gross) waana filimka Classic ah oo ilaa haatan aan laga xiiso dhigeyn daawashadiisa.
Raja Hindustani waxaa Tikit u goosteen 40-milyan iyo 975,000 waana filimka 5-aad ee loogu daawasho badan yahay Bollywood-ka 25-sano ugu dambeesay.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Raja Hindustani iyo todobaad walbo ganacsiga uu sameeyay kuna daabacan keedka shabakada BOI:
Todobaadka kowaad – 3.65 Crore
Todobaadka labaad – 3.59 Crore
Todobaadka sedexaad – 3.53 Crore
Todobaadka afaraad – 3.35 Crore
Todobaadka shanaad – 3.26 Crore
Todobaadka lixaad – 3.21 Crore
Todobaadka todobaad – 2.84 Crore
Todobaadka sideedaad – 1.80 Crore
Todobaadka sagaalaad – 1.69 Crore
Todobaadka tobonaad – 1.48 Crore
Todobaadka 11+ iyo wixii ka dambeeyo la isku daray – 14.35 Crore
Wadarta Guud – 43.14 Crore (Trade Figure)
Waxaa xusid mudan in filimka Raja Hindustan uu tiyaatarada baaqi kusii ahaa todobaadkiisa 11-aad iyo wixii ka dambeeyay asigoo keenay 14.35 Crore taasi oo ka dhigan in 33.26% ganacsigiisa guud uu sameeyay wixii ka dambeeyay todobaadkiisa 11-aad sidoo kalena filimkan 50-isbuuc oo xariir ah ayuu tiyaatarada saarnaa!
Moha Ali codsigiisa filimka Chennai Express
Cabdi maalik gees cadde codsigiisa filimka Dhadkan
Filimka KABHI KHUSHI KABHIE GHAM… iyo inta todobaad ee uu tiyaatarada saarnaa si aad u ogaatid RIIX HALKAAN